Wasiiro iyo Agaasimaha guud ee Ciidanka Badda Puntland oo booqasho ku tagay Degmooyin hoostaga Gobolada Bari iyo Garadafuu | Puntland Maritime Police Force
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraakda badda Puntland Cabdinuur Cilmi Maxamuud ‘’Biindhe,Wasiiro ku xigeeno,Agaasimaha guud ee Ciidamada Badda Puntland ”PMPF” Cabdinaasir Biixi Soofe iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland ayaa booqasho ku tagay degmooyinka iyo deegaano hoostaga Gobolada Bari iyo Gardafuu.
Degmooyinka iyo deegaanada hoostaga Gobolada Bari iyo Gardafuu ee ay booqdeen Mas’uuliyiinta Puntland ayaa kala ah;-
3-Xaabo iyo deegaano kale.
Guddoomiyaha Gobolka Gardafuu iyo qayabaha Bulshada ayaa si wayn uso dhoweeyay Mas’uuliyiinta Puntland ee booqday Dhulka ka baxasan Laamiga.
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraakda badda Puntland Cabdinuur Cilmi Maxamuud ‘’Biindhe oo la hadlay dadweynaha ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu uu yahay fulinta balanqaadkii Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’,kaasi oo ahaa in la tago meel kasta oo ka mid ah Dhulka Puntland,si loo ogaado baahiyaha Bulshada,waxna looga qabto.
Agaasimaha guud ee Ciidanka Badda Puntland PMPF’’ Mudane Cabdinaasir Biixi Soofe oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta la hadlay dadweynaha ayaa sheegay in Gobolka Gardafu ay keenayaan Ciidamo Badda Puntland ,si ay uga hawl galaan.
‘’Taageerada Gobolka iyo sidii uu u hormari lahaa waan jecelnahay waana ka shaqaynaynaa,anniga Safarka waxaa iga khuseeya Ciidanka badda oo ah Illaalda badda,safarkii hore ee aan halkan ku imi balan ayaan isku ogayn oo ah in Ciidamo la keeno Gobolkan,balantaasi oo meesheeda waana keenaynaa Ciidamo’’Ayuu yiri Agaasimaha guud ee Ciidanka Badda Puntland PMPF’’ Mudane Cabdinaasir Biixi Soofe.
Mas’uuliyiinta Puntland ayaa intii ay ku sugnaayeen Gobolka Gardafuu kulamo la qaatay Qaybaha Bulshada ku dhaqan Degmooyinka iyo deegaanada Murcanyo,Xaabo,Bareedo iyo Caluula,waxaana ay ka wada hadleen baahiyaha Gobolka,waxaana Mas’uuliyiinta Puntland ay balan qaadeen inay wax ka qabanayaan baahiyaha ay tabayaan Bulshada ku dhaqan Gobolka Gardafuu.